Ingqumbo yokuvukelana ngokwesondo, ebizwa ngokuthi i-orgasm, ayiyona nje imizwa yokwaneliseka nokwaneliseka, kodwa nayo inefuthe elihle kumzimba wonke. Impembelelo ye-orgasm emzimbeni womfazi kunzima ukugqithisa. Kufana nokuvumelanisa ukulinganiswa kwemvakalelo yowesifazane, nokuphucula umzimba wonke. Cinga yonke imiba yeenzuzo ze-orgasm kunye nokubaluleka kwayo ebomini yowesifazane.
Kubonakala ukuba ibhinqa elisoloko lifumana i-orgasm libukeka lincinci, litsho kwaye lonwabile ngakumbi kunokuba ibhinqa elinendlela efanayo yokuphila yayiyakubonakala, kodwa ngaphandle kokuvalelwa kwe-orgasm.
Izibalo zithetha ukuba isondo esivambileyo sesondo esilungileyo sivikelekile kakhulu kwizifo ezininzi ezinzulu zoluntu. Ngokomzekelo, umngcipheko wokubandezeleka kwi-myocardial infarction iyancitshiswa ngu-13%, isifo se-Alzheimer ngo-20%, umdlavuza webele kunye nomhlaza wesibeletho ngo-15%, uhlaselwa ngu-10%. Esi siphumo siphumo sichazwa ngokukhululwa kwama-hormone asebenzayo kumzimba-oxytocin kunye ne-dihydroepiandrosterone.
Kwaye akunandaba, kungakhathaliseki ukuba i-orgasm ifumaneka (ngokuqinisekileyo, kufanelekile ukuba ibe nendoda ethandekayo, ngoko ke inzuzo kuyo i-1,5-2 ngamaxesha aphezulu), ityala umfazi onamandla anamandla, ukwandisa ubungqina kunye namandla okusebenza.
Ukuvakalelwa rhoqo kwe-orgasm kukunyusa kakhulu ukukhuselwa komzimba, kukunceda umzimba uphumelele ukulwa nezifo ezininzi zentsholongwane. Ukongezelela, umxholo wokwaneliseka ngokwesondo opheleleyo uvimbela ukuvela kwezinto ezithintekayo, apho abafazi baxhomekeka kwixesha lokunyuka kwentwasahlobo. Ukwaneliswa ngokwesini kunempembelelo enomjikelezo wokuya esikhathini, ukuhlala rhoqo kunye nobude.
Amadoda avame ukukholelwa ukuba i-orgasm ibhinqa ifumaneka ngokuthe ngqo ngexesha lokwabelana ngesondo, kodwa oku akunjalo ngokupheleleyo. I-orgasm yowesibini iindidi ezimbini: i-clitoral ne-vaginal. Kwaye omnye nomnye unikela umzimba ukukhutshwa okufunekayo. Nge-orgasm encinci, kunye ne-vaginal, kukho ukukhawuleza kwegazi kwi-clitoris kunye nokuphambana kwe-uterus.
I-orgasm ye-clitor ibonwa ngokuqhelekileyo. Oku kubangelwa kukuba unako ukufumana onke amabhinqa kunye nomntu kwaye ngaphandle kwakhe ngokuphinga. Ngethuba lokuvuselela i-clitoris, kukho ukuhamba kwegazi kwiiseli zayo nganye, okubangele ukuba uxhatshazo lwayo lubonelele ukwaneliseka ngesondo. I-orgasm enjalo kwi-physiology yayo ifana nendoda, kwaye i-clitoris ngokwayo isakhiwo, indlela yokuzonwabisa kunye nokuphumla kufana nendoda yesilisa.
Ukufezekisa lolu hlobo lwe-orgasm, nayiphi na indlela efanelekileyo yokuvuselela ifanelekileyo: ukusuka kwi-caresses yomlomo kunye ne-caresses yokuvuselela. Indlela enomdla kakhulu kwaye ephumelelayo yokufezekisa i-orgasm ye-clitoral ivuselela ngoncedo lwesitya. I-Orgasm ifumaneka ngokukhawuleza kwaye ikhokelela kwimvakalelo enomdla kakhulu.
I-orgasm ye-vaginal ngokwayo iyona nto inengxabano. Ngokomzekelo, uSigmund Freud uthathwa njenge-orgasm ye-clitoral njenge-immature ifom yeentlobano zesini, kunye ne-vaginal orgasm ngenxa yokuphucula ukuziphatha ngokwesini. Kwiminyaka ye-1940, uMasters noJohnson babengavumelani nale ngcamango, bafakazela ukuba zombini i-orgasms ikhona ngokufanayo, ukuzalisana. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le nto ihlala ikhona ukuba i-vaginal form of orgasm ayikwazi ukuvalelwa yintombazana.
Ukufezekisa i-vaginal orgasm kubalulekile ukuba ungadluli ngokukrakra kwayo, ukuze ukwazi ukuphumla ngokukhulu kunokwenzeka kwaye uqeqeshe iisiphako zesini njengokuba ulala ngesondo, kwaye nangaliphi na ixesha ngaphandle kokuthatha inxaxheba yindoda.
Kwimpembelelo ye-orgasm emzimbeni womfazi kwavela iingxoxo ezininzi kunye neengxabano, ezisoloko zikhange umdla. Kakade, onke amabhinqa afuna ukuziva ephelele kwaye akhangele i-100%, ngaphezu koko, ngamnye umfazi ufuna ukuziva unqanaba eliphezulu kakhulu lokuneliseka ngokwesondo.
Ukuphanda umzimba kwisigxina sovuyo, oku kutshintshwa kwezi ziko zesini kunye nayo yonke into ebonakaliswe ngethuba lomlomo :
- i-clitoris iyalula kwaye iyanqande, njengokungathi "ukukhukhuma" kufinyelela ubukhulu bayo;
- i-labia enkulu ivula kwaye iyaba yincithakalo, kwaye iincinci-zinyathela kwaye zithatha phambili;
- ubulili bude, iindonga zayo zinyanzelisiwe kwaye zifumana umbala obomvu;
- I-pulse iphindwe kabini ngokukhawuleza;
- isisu sikhula phantse amaxesha amabini kwaye sikhuliswa;
- Kukhona ubunzima obunzima bemisipha yeenxalenye zeplavic, isisu esiswini, isisu kunye nomqolo ophantsi;
- ukubonakalisa ubuso kubuso, ukubonakalisa ukwaneliseka ngokupheleleyo ngokwesondo;
- impembelelo ye-orgasm yomelele kangangokuba ingqondo kunye nokucinga kuyaba nzima;
- ukuphefumula kwandisa kathathu;
- kukho ukubuyela kwamandla amakhulu.
Ngenxa yeenguqu ezinamandla kunomzimba ngexesha lesondo, i-orgasm yindlela efanelekileyo yokuphumeza ukuvisisana komfanekiso, kwaye ngenxa yoko-kunye nokutya kwendalo yonke.
Ngoko ke, ungalokothi uhlehlise isondo kwindawo yokugqibela. Ubuhlobo bobudlelwane obusondeleyo yindlela efanelekileyo yokufezekisa i-orgasm, inendima yayo ebomini yowesifazane inkulu kwaye ihlanganiswe.
I-pluses eziphambili zesini esifanelekileyo
Ubulili obubi - kutheni kwenzeka
Ngaba kunokwenzeka ukuba udle amnandi ngexesha lokukhulelwa?
I-Horoscope ngamawele azalwe ngonyaka we-tiger ngo-2010
Othandekayo uTimati waphakamisa intanethi ngeefoto ezingenanto
Xa uzonqumla izinwele
Umnyaka omtsha waseTshayina 2015: unyaka wawo, xa uqala, iimpawu